Usayizi waphansi: 544.502 Sq feet
Azikho izindlela zokungathengiswa kwezezakhiwo eBahria Town Phase 7. Woza uzozibonela. Bheka ukunikezwa kwethu ngeFulethi elihle kakhulu elinganelisa isidingo sakho. Bhuka iFlat Square yakho engu-450 namuhla ukumaka ukuqala kwekusasa lakho eliqhakazile. Izakhiwo ezikule ndawo zithengiswa ngokuphelele, okuhlanganisa. Sithembe, uzocindezelwa kanzima ukuthola impahla efanayo ewela ngasendaweni efanayo, ibanga lentengo lama-Rs 15,000. Funa okunikezwayo kusamile! Impahla yokuqasha enjengale kunzima ukuyithola kulezi zinsuku. Sikunxusa kakhulu ukuthi uthathe lo mnikelo, ngaphambi kokuba omunye umuntu abaleke. Imininingwane yempahla ibhalwe kanje. Lesi sakhiwo sifaka indawo yokwamukela izivakashi eyenziwe kahle. Hlala uthokomele ekhaya lakho ngenxa yohlelo lokushisa oluphakathi nendawo. Uhlelo lomphakathi lokulahla imfucuza luqinisekisa inhlanzeko ngaso sonke isikhathi. Isimo somoya esimaphakathi ukuze usindiswe emlilweni oshisayo wezinyanga zasehlobo. Uma ufuna imininingwane ethe xaxa ngalokhu kunikezwa, sicela usithinte.